Khuzani – “DSD uculela indibilishi – AMABHINCA
Khuzani – “DSD uculela indibilishi
Wayenza indaba uNtencane nengoma yakhe emnandi kakhulu evele ohlwini lwezingoma ezizohlukanisa unyaka. Kutatazele nogqihile njengoba abaculi bephawula ngobuningi ngokungena kwale ngoma.
UKhuzani Mpungose ongomunye wabaculi abebebhekiwe ukuthi engavela ohlwini ngengoma yakhe ethi ‘Isilingo’, uzwakalise ukufudumala kwakhe ngenkathi ethola ukuthi kunabaculi abakhuluma amagama angemahle ngokungaveli kwakhe ohlwini. “Kunabalandeli abangakhulumi kahle ezinkundleni zokuxhumana abenza sengathi bengiqhathwe noNtencane”.
Zikhuza ukuchitheka kwegazi Ezebhova
Isinelogo ethi yona Injomane
UZanefa Ngidi utalabhe Imfezemnyama
Ushaya ibuya uMajic Voice
Ungene kanjani uSgabiso emculweni
“Bese kubakhona abaculi abafana noMicondo abenza sengathi bebengafisi bona ukuthi izizngoma zab zivelele njengeyami. Kungani bengazamanga ukuphusha izingoma zabo ngoba zintsha nazo zifana neyami? Angithi bakhombisa khona vele ukuthi ngiyabehlula”.
“UDunudunu usengamane esho nje ukuthi akayiphushanga eyakhe ngoba efuna kuvelele abafana abancane. Ukube ingenile eyami ngabe uthini manje? Ubezobiza mina ngomfana omncane? Akungadlalwa ngabantu. Ngibone noCharles Khuzwayo kanye noMthobisi bejabule befa ubungafunga ukuthi indaba ibingathi sobabili noNtencane kanti cha”.
“Kunomculi oze wakubeka ngembaba ukuthi ukhipha ingoma eyodwa,single track ethi ‘Isikorokoro sami’ ngoba efuna ukunqamula ngayo unyaka. Ube esedumala ethola ukuthi ivele yashawa indiva ingoma yakhe. Lona omunyeke indaba yakhe angazi ngizoyithini ngoba uculela indibilishi, ayikhulumeki indaba yakhe”.
“Ngabona uFakude ebhizi ephusha ingoma yakhe ukuze inqamule unyaka kodwa manje usezenza umuntu ongazange wayishaya indiva indaba yokunqamula unyaka. Ngichzwa ukuthi Isilingo sitatazelisa ababhemu”.
“Isililo negazi elichithekayo akupheze. Kubuhlungu kakhulu ukubulawa komuntu ongakwazi nokuzivikela,” kuphetha uNdlemnyama. USmangele uthe naye kumjabulise kakhulu ukwenza ingoma le ng...
Isilo soMaskandi Injomane kaMgabhi uKhangelani DSD Mhlongo uthathe isinqumo sokwenza okuhlukile nokuzomenza ahluke kwabanye. Ukhulume nabathandi bomculo wakhe ngale logo yakhe wathi: “Kun...
Uqedile ngeMfezemnyama lowo owabe engamathe nolimi nayo begadla Igcokama elisha ngo-2016. Kusukela lapho wavele wanyamalala emculweni kwathi Ifezi yaxokiza yazwana neGcokama. Le nsizwa ikhiphe ...
Previous Previous post: UCevuzile ugigiyela Igcokama
Next Next post: UTshatha uyiphendulile eyeGcokama